अब त अति भएन र ? |
प्रकाशित मिति :2018-08-28 16:27:34
हरेक छोरी असुरक्षित छन् । दिन प्रतिदिन महिला बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । देशको राजधानीदेखि विकट जिल्लाका घर शहर कहीकतै महिला सुरक्षित छैन ।
बिहान स्कुल, कलेजको लागि घरबाट निस्केकी छोरी बेलुकी सुरक्षित घर फर्कने हो कि होइन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । भरखरै मात्रै कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले झनै भयावह स्थिति सृजना गरेको छ ।
त्यसलगत्तै पोखरा लामाचौर–१९ कि १३ वर्षिय किशोरी पुष्पा केसी मृत अवस्थामा भेटिइन् । पोस्टमार्टम रिपोटमा उनी बलत्कृत नभएको पाइयो तर पनि यो घटना किन र कसरी भयो भन्नेमा अन्योल नै छ । बलत्कार नभएको भए पनि प्रयास चाहिँ भएको हुन सक्नेमा सबैको शंका छ ।
काकाले भतिजीलाई, बाबुले छोरीलाई, नातीले हजुरआमालाई बलात्कार गरेका घटनाले महिला कोहीसँग सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ । दूधे बालिकादेखि वृद्ध महिला कोही सुरक्षित छैनन् । कतिपय बलत्कारको घटनामा रक्षक नै बलात्कारको दोषी भएका समाचार हामी पढ्न बाध्य छौं । सार्वजनीक स्थल, वनजंगल, होटल, स्कुलमा मात्र होइन सुरक्षा दिने प्रहरीको हिरासतमा समेत महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय त बलात्कारपछि पोल खुल्ने डरले हत्याका घटना बढेका छन् ।
नेपालको कानुनमा मृत्युडण्डको व्यवस्था नभए पनि मुलुकी ऐन अनुसार महिलालाई विशेष प्रतिरक्षाको अधिकार कानुनले दिएको छ । जुन कानुनले बलात्कृत महिलाद्वारा बलात्कारीलाई मार्न पाइने कानुन छ । नेपालको मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीले कुनै पनि पीडित महिलाले आफू बलात्कृत भएको एक घण्टाभित्र बलात्कारीलाई मारेको खण्डमा ती महिलालाई कानुन नलाग्ने छुट दिएको छ । महिलाहरू अधिकारबारे सचेत हुने हो भने आफू बलात्कृत हुनासाथ बलत्कारीलाई मारिदिन सक्दछन् ।
तर यो कानुनको महलबारे अधिकांश बलात्कृत हुने महिलाहरू नै अनभिज्ञ छन् । एउटा महिलाको अस्मिता त्यसमाथि पनि बलजफ्ती बलात्कार गरेर यौन पिपाषुहरूले यौनको तृष्णा मेटाउन खोज्नु घृणित कार्य हो । र समाजले पनि त्यस्ता कार्यलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिएको छ । अहिलेसम्मका घटनालाई हेर्दा जसले प्रतिकार गर्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्ति बलात्कृत हुने गरेको देखिन्छ । जसमा बालिका र वृद्धा महिला पर्छन् । पहिलो कुरा त बालिका र वृद्धामाथि मन्द मानसिकता भएका व्यक्तिले बलात्कार गर्छन् ।
किशोरीहरूमाथि हुने बलात्कार भने अलि फरक छ । किशोरी वा युवा महिलामाथि हुने बलात्कारमा एउटा केटा मात्रै दोषी नहुन सक्छ । त्यसमा त्यो बलात्कृत हुने किशोरी या महिलाको पनि दोष हुन सक्छ । जबसम्म हाउभाउ त्यो स्तरको हुँदैन, तबसम्म युवा महिला वा किशोरी बलात्कृत हुँदैनन् भन्ने हाम्रो यो समाज बलात्कार हुनुमा महिलालाइ नै दोषी मान्दै आएको छ ।
घरभित्र बलात्कारका घटना झन् मौलाएको छ । परिवारले नै घटनालाई ढाकछोप गर्दा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । हाम्रो समाज महिलामैत्री कहिले बन्ने ? आजकल प्रत्येक दिनजसो बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । हरेकदिन ताजा खबर बोकेर आउने अखबारले महिला बलत्कारको घटनाका समाचार बोकेरै आएका हुन्छन् । कतिपय घटनाका दोषीहरू जेल सजाय पनि भोगिरहेका छन् । तर पनि बलत्कारको घटना घट्नुको सट्टा बढ्दो अनुपातमा रहेको पाइन्छ । घरबाहिर गएकी छोरी समयमा घर नपुग्दा परिवारमा चिन्ता हुन थालेको छ ।
कामका लागि अरुको घरमा बसेकी छोरी बलात्कारको सिकार भएका छन् । आखिर किन हुन्छ बलात्कार ? कानुन फितलो भएर ? दोषीलाई उचित कारवाही नभएर ? वा पुरुषले महिलालाई हेप्ने प्रवृतिले ? प्रश्नै प्रश्नको गाँठो कहिले फुक्छ ? कारण जे होस् हरेकदिन दानवको शिकार बनेका छन् महिला । जसले गर्दा कुनै पनि महिलाले म सुरक्षित छु भन्ने आभास गर्न सक्दिनन् । हरेक आमालाई छोरीको मात्रै चिन्ता होइन, छोराको पनि चिन्ता छ । कतै छोरा बलात्कारी बन्ने त होइन ? नेपालमा कानुन फितलो भएकै कारण बलात्कारका घटनामा बृद्धि भएको हो भन्ने सबैको ठम्याइ छ । यदि फाँसी दिने कानुन भएको भए सायद यति धेरै बलात्कारका घटना बढने थिएनन् होला ।